Ugcinwe esitokisini obesabisa osopolitiki ngokuthi uzobabulala
Nonthuthuko Ngubane | January 15, 2019
USAGCINWE esitokisini owesilisa obesabisa osopolitiki ngokuthi “uyinkabi” ezobabulala uma bengamkhokheli imali.
UMnuz Morris Mdu Mkhungo (46) ovele eNkantolo yaseMlaza izolo ubhekene necala lokufuna imali ngendlela engekho emthethweni.
Umsolwa kuthiwa ubeshayela ucingo abagilwa athi uthunywe ukuthi ababulale, uma befuna ukuphila abakhiphe imali.
Omunye okuthiwa umshayele ucingo yikhansela laseNtshanga igama lalo elizogodlwa njengoba uphenyo lusaqhubeka. Ikhansela lithe umsolwa ulishayele ucingo ngoLwesibili futhi walithumelela ama-sms elithembisa ukulibulala uma lingamkhokheli uR5000.
“Okungimangazayo ukuthi wenze sengathi ungumuntu ongaziyo futhi uyazi ukuthi ngiyikhansela. Ungitshele ukuthi uthunyiwe ukuthi angibulale wathi uma ngingamniki imali ngeke anginike igama lomuntu omthumile futhi aluzophela usuku ngisaphila ngoba uzongithola,” kusho ikhansela.
Okhulumela oKlebe KwaZulu-Natal, uCaptain Simphiwe Mhlongo, uthe umsolwa uzobuyela enkantolo ngesonto elizayo.
“Umsolwa uboshwe ngoLwesihlanu emuva kophenyo loKlebe. Kuvele ukuthi umsolwa ubezenza inkabi eqashelwe ukubulala laba abebashayela ucingo. Ngokophenyo olusenziwe ubethumela ama-sms noma ashaye ucingo afune imali ukuze angaqhubeki nokubulala. Uphenyo luveza ukuthi umsolwa baningi abantu abezama ukuthola imali kubona ngale ndlela. Umsolwa uvelile enkantolo namhlanje (izolo), usagcinwe esitokisini. Icala lihlehliselwe uJanuwari 22,” kusho uMhlongo.
Isolezwe lithole ukuthi umsolwa ubefuna imali eyahlukene kubantu abahlukene.
Ikhansela lithe yize umsolwa eveza ukuthi yena ubezifunela imali ngokubashayela ucingo kodwa ngeke ayeke ukusaba.
“Okwenza ngibe nemibuzo ukuthi inombolo yami uyithole kanjani futhi wazi kanjani ukuthi ngiyikhansela. Ngisathukile nje ngalokhu obekwenzeka,” kusho leli khansela.